के मेडिकेयरले फ्लू शटहरू ढाक्छ? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
कल्याण प्रेस औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल समुदाय कम्पनी, समाचार समाचार समाचार, कल्याण औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कम्पनी कम्पनी स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार मनोरञ्जन
मुख्य >> कम्पनी >> के मेडिकेयर फ्लू शट कभर गर्दछ?
के मेडिकेयर फ्लू शट कभर गर्दछ?
गिरावट र जाडो महिनाहरूमा तपाईंको स्वास्थ्य बचाउन फ्लू शटहरू आवश्यक छन्।
फ्लू मौसम सामान्यतया नोभेम्बरमा सुरु हुन्छ र अप्रिल देखि रहन्छ। सामान्यतया डिसेम्बर र फेब्रुअरी बीचमा धेरै केसहरू हुन्छन्। २०१-201-२०१ flu फ्लूको मौसम असामान्य थियो कि यो मे सम्म चलेको थियो। इन्फ्लुएंजा, अनौपचारिक रूपमा फ्लू कहलाइन्छ, ज्वरो, खोकी, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, थकान, र शरीर दुखाइ को कारण।
65 65 बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिको लागि फ्लू खतरनाक र सम्भावित जीवन जोखिमपूर्ण छ। रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरूका अनुसार यो जनसंख्या फ्लूबाट जटिलताहरू हुने खतरा बढी छ। CDC ), जसले अस्पतालमा भर्ती हुन सक्छ र मृत्युसमेत गराउन सक्छ। २०१-19-१-19 फ्लु मौसममा, .9२..9 मिलियन मानिस बिरामी भए;7647,००० लाई अस्पतालमा भर्ना गरियो; र ,१,२०० मरे। फ्लूबाट सबै अस्पताल भर्नाहरूको ety ० प्रतिशत 65 बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा देखा परेको छ,aअनुसार अध्ययन सीडीसी द्वारा सह-लेखक र 2019 मा प्रकाशित ।
वार्षिक फ्लू शट पाउनु मौसमी फ्लू र यसको जटिलताहरूलाई रोक्नको लागि एकल उत्तम तरिका हो CDC । केहि मानिसहरु जो फ्लू शट ले बिरामी हुन सक्छ; यद्यपि, क अध्ययन २०१ 2018 मा प्रकाशित भयो यो पत्ता लगाईयो कि खोप लगाए पछि फ्लू लिने मानिसहरूलाई न्यून लक्षणहरू र अस्पतालमा भर्ने खतरा कम थियो।
65 65 बर्ष भन्दा बढि उमेरका लागि, मधुमेह वा दम जस्ता प्रमुख चिकित्सा शर्तहरूको लागि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीहरू छन्, उदाहरणका लागि किमोथेरापीबाट, वा नर्सि home होममा बस्ने, डाक्टरहरूलाई फ्लू लक्षणहरू जस्तै बुखार, चिसो, टाउको दुखाइको बारेमा सूचित गर्नुपर्दछ। र शरीर दुखाइ, भन्छन् ईशानी गांगुली , एमडी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूलमा चिकित्सा सहायक सहायक प्रोफेसर। गम्भीर लक्षणहरूको लागि चिकित्सा सहायता लिन पनि महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै १० fever डिग्री [डिग्री] माथिको ज्वरो, सास फेर्न समस्या, र गोलमाल।
तपाइँ तपाइँको रगत को प्रकार कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ?
सम्बन्धित: फ्लू शट साइड इफेक्ट र प्रतिक्रिया
यदि तपाईं 65 65 वर्ष वा सो भन्दा ठूलो हुनुहुन्छ भने, तपाईं मेडिकेयर कभरेजको लागि योग्य हुनुहुन्छ, र भाग्यवस, मेडिकेयरले फ्लू शटहरू समावेश गर्दछ। यद्यपि, सबै मेडिकेयर कार्यक्रम समावेश गर्दैन सित्तैमा फ्लू शटहरु। मेडिकेयर भाग बी र सी (मेडिकेयर एडवांटेज प्लान) फ्लू शटको पूरा लागत कभर गर्दछ यदि तपाईं फार्मेसी वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले मेडिकेयर भुक्तानी स्वीकार गर्दछ। पहिलो पटक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको प्रयोग गर्दा, उनीहरू मेडिकेयर असाइनमेन्टहरू स्वीकार्ने प्रमाणित गर्न अगाडि कल गर्नुहोस्।
फ्लू शटहरूको लागि मेडिकेयर कभरेज कसरी प्राप्त गर्ने
त्यहाँ चिकित्सा को धेरै भागहरु छन् मेडिकेयर र मेडिकेड सेवाहरूको लागि केन्द्रहरू । प्रत्येक अंशले के कभर गर्छ र कुन कुरा तपाईंलाई फाइदाजनक छ भनेर जान्न उत्तम हुन्छ।
मेडिकेयर भाग A ले अस्पताल बस्दछ — फ्लू शट समावेश गरिएको छैन
मेडिकेयर भाग A ले अस्पताल भर्ती, कुशल नर्सि facilities सुविधाहरू, धर्मशाला, र घर स्वास्थ्य सेवा शामिल गर्दछ। यसले फ्लू शटलाई कभर गर्दैन।
यो 65 65 बर्ष वा माथिका योग्य व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क छ। सामान्यतया, यदि तपाइँ वा तपाइँको पति / पत्नीले कम्तिमा १० बर्षको लागि चिकित्सा करहरु तिर्नु भयो भने मेडिकेयरको यो अंश नि: शुल्क छ। तपाइँ तपाइँको th 65 औं जन्मदिन अघि तीन महिना अघि यसका लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो th 65 औं जन्मदिन अघि सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं स्वत: भाग ए मा भर्ना हुनुहुनेछ अन्यथा, तपाईंले यसका लागि अनलाइन वा सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा साइन अप गर्न आवश्यक पर्दछ।
मेडिकेयर भाग बी ले निवारक सेवाहरु लाई शामिल गर्दछ, फ्लू शटहरु सहित
मेडिकेयर भाग बी तपाईको चिकित्सा बीमा हो। यसले रोकथाम सेवाहरू कभर गर्दछ, फ्लू शट जस्ता। मेडिकेयरले प्रत्येक शट प्रति शटको लागि भुक्तान गर्दछ तर दोस्रोमा कभर हुन सक्दछ यदि यो मेडिकल रूपमा आवश्यक छ भने। चिकित्सा कभरेजमा फ्लू शटहरू समावेश छन् जुन Food 65 बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिका लागि संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ।
फ्लू शटको प्रकार ब्रान्ड नाम + 65+ को लागी मनपर्‍यो? कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
उच्च खुराक चतुर्भुज फ्लुजन हो कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
समायोजित फ्लू भ्याक्सिन फ्लुड हो कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
मानक खुराक चतुर्भुज शटहरू अफ्लुरिया चतुर्भुज हैन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Fluarix चतुर्भुज हैन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
FluLaval चतुर्भुज हैन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
फ्लुजन चतुर्भुज हैन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
चतुर्भुज सेल आधारित इन्फ्लूएन्जा शट फ्लुसेल्भक्स चतुर्भुज हैन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
पुनः संयोजक चतुर्भुज इन्फ्लूएन्जा शट फ्लब्लोक चतुर्भुज हैन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
मेडिकेयरले नाक स्प्रे फ्लू खोपहरू ढाक्दैन, किनकि एफडीएले उनीहरूलाई यस उमेर समूहका लागि अनुमोदन गरेको छैन।
मेडिकेयर पार्ट बीले एक मौसमी H1N1 स्वाइन फ्लू खोप, न्यूमोकोकल खोप, र हेपेटाइटिस बी शटहरूलाई कभर जोखिम भएको व्यक्तिको लागि कभर गर्दछ।
भाग बीमा केहि शटहरू समावेश छन् यदि तिनीहरू बिरामी वा चोटपटकको लागि उपचारसँग सम्बन्धित छन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको डाक्टर एक टिटानस शट संग एक चोट को उपचार गर्दछ।
भाग बी वैकल्पिक हो, र केहि व्यक्तिहरू जससँग नियोक्ता बीमा छ, तिनीहरू आफैले वा आफ्नो पति / पत्नी द्वारा, कि बीमा राख्न विकल्प लिन सक्छन् र पछि पार्ट बीमा साइन अप गर्न सक्छन्। तपाईं यसको लागि आफ्नो प्रारम्भिक नामांकन अवधिमा साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ, भाग एको साथ समान तपाईं पनि काम गर्न रोक्दा वा बीमा कभरेज गुमाए पछि तपाईं months महिना सम्म यसको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं पार्ट बी को लागी साइन अप नगर्न रोज्नुहुन्छ तर त्यसो गर्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले ढिला ईनरोलमेन्ट जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्छ।
मेडिकेयर पार्ट सीमा पार्ट्स ए र बी-फ्लू शट समावेश छ
मेडिकेयर पार्ट सी योजनाहरू दुबै ए र बी फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। भाग बी लाभ सहित, चिकित्सा भाग सी फ्लू शट कभर। केही भाग सी योजनाहरुमा पर्चेको औषधि कभरेज समावेश छ, सामान्यतया मेडिकेयर भाग डी अन्तर्गत कभर। तपाई यसका लागि नामांकन अवधिको अवधिमा पनि साइन अप गर्नुहुन्छ।
मेडिकेयर पार्ट डीले प्रिस्क्रिप्सन र तपाईंलाई आवश्यक पर्ने अन्य खोपहरू समेट्छ
मेडिकेयर पार्ट डी एक वैकल्पिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग योजना हो। योजनाहरू कापाएमेन्ट्स, सिक्युरन्स, कटौतीयोग्यहरू, र लाग्ने औषधि कभरेजमा भिन्न हुन्छन्। यी योजनाहरूले अन्य खोपहरू समेट्छ, फ्लू शट बाहेक - जब उनीहरू व्यावहारिक र चिकित्सकीय आवश्यक हुन्छ। भाग डी अन्तर्गत कभर खोपहरू समावेश:
दाद खोप: सबै पार्ट डी योजनाहरूले दाता खोप कभर गर्नै पर्दछ। त्यहाँ दुई प्रकारका एफडीए-अनुमोदित दाद खोपहरू, Zostavax (zoster) र Shingrix (पुनः संयोजक zoster) । शिंग्रिक्स भ्याक्सिन २०१ 2017 देखि उपलब्ध छ र प्राथमिक शिंगल खोप हो।
टिटानस, डिप्थीरिया, र पेर्ट्युसिसका लागि Tdap भ्याक्सिन (पनि हूपि cough खाँसी पनि भनिन्छ)
MMR (दादुरा, गालगुंड, रुबेला) भ्याक्सिन
क्षय रोगको लागि बीसीजी खोप
हेपेटाइटिस ए र हेपाटाइटिस बी व्यक्तिहरूलाई खोप उच्च जोखिम मानिन्छ
सम्बन्धित: एकचोटि 50० बर्षको उमेरका लागि विचार गर्न भ्याकेसनहरू
तपाइँले तपाइँको खोपको लागि तिर्ने रकम तपाइँले खोप लिनु भएको ठाउँमा निर्भर हुन सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको योजनाको कभरेज नियमहरू जाँच्नुहोस् र तपाईं कहाँ आफ्नो खोप सब भन्दा कम लागतमा पाउन सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् ग्याल ट्राको, आरएन, बीएसएन-ओसीएन, बिरामी अधिवक्ता र संस्थापक भन्छन्। मेडिकल बिल 911 । सामान्यतया, तपाईले आफ्नो भ्याक्सिनहरू इन-नेटवर्क फार्मेसीमा वा एक डाक्टरको कार्यालयमा तिर्नु पर्छ जुन औषधि र इंजेक्शनको लागि पार्ट पार्ट योजना बिल गर्न फार्मेसीसँग समन्वय गर्दछ।
मेडिकेयर योजनाहरूमा नामांकन गर्न, स्वास्थ्य बीमा एजेन्टसँग कुरा गर्नुहोस्, सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा सोधपुछ गर्नुहोस्, वा मेडिकेयर.gov हेर्नुहोस्। यद्यपि भाग A योग्य भएकाहरूका लागि नि: शुल्क छ, तपाईं पार्ट बी, सी, र डी को लागी मासिक प्रीमियम भुक्तान गर्नुहोस्।
कसरी छिटो मा vyvanse लात बनाउन
मेडिकेयर पूरक बीमा योजनाहरू पनि छन्, जसलाई मेडिगाप कभरेज भनिन्छ, जुन निजी कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। यी योजनाहरूले तपाईंको मूल मेडिकेयर (भाग ए र बी) को साथ काम गर्दछन् र कपपेमेन्ट्स र सिक्युरन्सको लागि भुक्तान गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ मेडिकेयर पूरक योजनाहरू बिभिन्न किसिमका छन् त्यसैले कुन चाहिँ तपाईंको लागि उत्तम हो भन्ने निर्धारण गर्न आवश्यक छ। वरिष्ठसँग काम गर्नमा माहिर बिमा एजेन्टले तपाईंलाई बिभिन्न योजनाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न सक्दछ।
के फ्लू शट वरिष्ठका लागि निःशुल्क छन्?
मेडिकेयर पार्ट बी वा सी भएका वरिष्ठहरूका लागि प्रति वर्ष एउटा फ्लू शट नि: शुल्क हुन्छ। केहि वरिष्ठहरु का यी मेडिकेयर योजनाहरु छैन र फ्लु शटको लागि जेबबाट पैसा तिर्नु पर्ने हुन सक्छ।
मेडिकेयर, मेडिकेड, वा अन्य स्वास्थ्य बीमा बिना, फ्लोड वा फ्लुजन उच्च डोजको लागत तपाईंको फार्मेसीमा निर्भर गर्दछ $ १$ to देखि १$० सम्म लिन सक्दछ। केही फार्मेसीहरु करीव $ 70 को लागि वरिष्ठ लाई फ्लू शट प्रदान। तपाईको स्थानीय वरिष्ठ केन्द्र वा काउन्टी स्वास्थ्य विभागको साथ पनि तपाईको क्षेत्र मा केहि स्थानहरु उपलब्ध गराईएको छ कि भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ नि: शुल्क फ्लू शटहरू बीमा बिना मान्छे को लागी।
तपाईले सिंगलकेयरबाट कुपन प्रयोग गरी छुट मूल्यहरू पाउन सक्नुहुन्छ। फ्लोड वा फ्लोजोन उच्च डोजको खोजी गर्नुहोस् singlecare.com वा एकलकेयर अनुप्रयोगमा।
माइग्रेन को लागी एक पर्चेको बारेमा जब तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्ने
एटिभन साइड इफेक्ट र अन्तर्क्रियाहरू, र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
xanax र alprazolam बीच के फरक छ?
डाक्टर मा जाँच के हो?
कति म्यूकिनेक्स डीएम मँ उच्च प्राप्त गर्न को लागी लिन्छु
आधा गोली कति लामो हुन्छ?
एस्पिरिन र एसिटामिनोफेन बीच के फरक छ?
एक प्रोबायोटिक के हो र यो के गर्छ